फेरी आयो कोमल ओलीको अहिले सम्मकै उकृष्ट गीत “छड्के तिलहरी” (भिडियो)
“गायिका तथा राष्ट्रिय सभाकी सांसद कोमल ओलीले तीजलाइ लक्षित गर्दै नयाँ गीत बजारमा ल्याएकी छिन् ।” ‘ंछड्के तिलहरी’ बोलको गीतमा उनकै दिदी बहिनीको अभिनय देख्न सकिन्छ । भिडियोमा दुबै दिदी बहिनी बीच हुने गहिरो प्रेम प्रस्तुत गरिएको छ । एकनारायण भण्डारीको शब्द संगीत रहेको गीतको भिडियो पवित्रा आचार्यले निर्देशन गरेकी हुन् । भिडियोमा रामेश्वर कार्कीको छायाकंन र सुप्रिम पराजुलीको सम्पादन रहेको छ । कोमल ओली नेपालका चर्चित लोक गायिकाहरु मध्ये एक हुन् । कोमल ओली रेडियो नेपालकी समाचार बाचिकाको रूपमा पनि काम गरिसकेकी छिन् । ंरेडियो नेपालको जागिर छाडेर विक्रम सम्वत २०७३ सालदेखि उनी राप्रपा नेपालमा पार्टी प्रवेश गरेर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी थिईन ।
कोमल वली नेपाली सञ्चार जगत देखि सांगितिक जगत सम्म चीर परिचित नाम हो । ‘रेडियो नेपालमा कोमल वलीबाट समाचार सुन्नुहोस’ भनेको नसुन्ने कमै होलान् । त्यति मात्र होइन वर्षेनी तीजको समयमा अनौठा अनौठा गीत ल्याएर चर्चामा आउने नाम पनि हो कोमल वली । हुन त महिलाहरुको महान चाड तीज आउन एक महिनाभन्दा बढी समय बाँकी छ । तर तीजका गीतले बजार तताईसकेका छन् । तर यो पटक कोमल वलीको गीतको त्यति चर्चा छैन । न त उनको विवाह नै भएको छ ।
ंसमबन्धित समाचार- ‘धर्तीमा नारीभन्दा सुन्दर कोही छैन । हाम्रो सुन्दरताकै कारण त पुरुषहरू मरिमेटेर हाम्रो पछि लाग्छन् ।’ रक्षा नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले भूकम्पपीडित महिलालार्ई राहत वितरण गरेको एक कार्यक्रममा गायिका कोमल ओलीले नारी सुन्दरताको बयान यसरी नै गरिन् । कार्यक्रममा पीडित/प्रभावित महिलालाई भूकम्पको त्रासबाट केही बाहिर ल्याउन मनोरञ्जन प्रदान गर्ने गीत गाउन आएकी ओलीले गीतमा भन्दा धेरै समय नारी सुन्दरताको बयानमा खर्चिन् । ‘लाज नमान्नुस्, हामी सबैभन्दा सुन्दर छौँ । दुनियाका बलवान, धनवान, शक्तिवान सबै पुरुष नारीको कोखबाट आएका हुन् र ती सबै हाम्रो सुन्दरतामा लठ्ठ पर्छन् । उनीहरूलाई नारी नभई हुँदैन ।’
गायिका ओलीले राजनीतिक पार्टी र नेताहरूलाई कटाक्ष गर्नसमेत भ्याइन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई बाहिरिइसकेका थिए । भट्टराईको लामो भाषण सुनेर बसेकी ओलीले भनिन्– देशमा प्रजातन्त्र आयो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, हामी महिलाले केही पाएनौँ । यी नेताहरू आउँछन्, यो गर्छु, ऊ गर्छु भनेर भाषण गरेर जान्छन् । हाम्रो अवस्था जस्ताको तस्तै रहन्छ ।’ कोमल ओलीले भाषण गरिरहँदा कार्यक्रममा आएका महिलाले जोडले ताली पिटेका थिए । मानौँ महिलालाई नेता भट्टराईको भन्दा ओलीको भाषण राम्रो लाग्दै थियो ।
कोमल ओलीको गीत सुन्न आतुर महिला उनका भाषणमा उत्तिकै जोसिँदै थिए । पूरा हल उनको भाषणमा गुञ्जायमान हुँदै थियो । राहत लिन आएका भूकम्पपीडित महिलालाई हौस्याउँदै ओलीले भनिन्, ‘बाटोमा सुन्दर महिला देखे ‘वाह !’ भन्ने कति हुन्छन्, हुन्छन् । तर, जतिसुकै राम्रो पुरुष भए पनि महिलाले ‘वाह’ भन्दैनन् ।’ ‘पृथ्वीमा सर्वश्रेष्ठ हामी महिला हौँ । महिलाले अनेक हिंसा सहेर बसेका छन् । पुरुषका चाहनाअनुसार जे भन्यो त्यही गरे ठीक, नत्र बेठीक भन्ने पुरुष धेरै छन् । यो पनि महिला हिंसाको रूप हो,’ उनले भनिन् । ‘महिलाको कोखबाट जन्मने अनि हामीलाई नगन्नेहरूलाई हामीले किन गन्ने ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
हामी महिलाले पुरुषले गर्ने सबै काम गर्न सक्छौँ । तर, पुरुषले महिलाले गर्ने सबै काम गर्न सक्दैनन् । हामी बच्चा जन्माउन सक्छौँ, पुरुषले सक्छन् ?’ ओलीले नारी सुन्दरता र महिला हिंसाका बारेमा करिब पाँच मिनेट भाषण गरिन् । संविधानको मस्यौदामाथि गम्भीर भएर अध्ययन गर्न बाबुरामले भनिरहँदा उँघेका महिला ओलीको सुन्दरताको बखानमा जोसिएका थिए । महिलाको सवालमा आफू गम्भीर भएको र कानुनी रूपमा महिलाको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने बाबुरामको गहन भाषणलार्ई कता–कता फिक्का पार्ने कोसिस ओलीले गरिन् । ‘पार्टीका कुरा नसुन्नुस् भनेको होइन, तर उनीहरू आफूले भनेको कुरा पूरा गर्दैनन् ।
हामीले आफैँ गरेर देखाउनुपर्छ हामी कोहीभन्दा कम छैनौँ । आफूसँग जस्तो सीप, क्षमता र हैसियत छ, त्यसैअनुसार काम गरे बाँच्न कठीन हुँदैन,’ ओलीले भनिन् । पुरुषका बारेमा बोलेर मिडियामा छाइरहने ओलीले भनिन्, ‘म बिहान उठ्छु । तनक्क जिउ तन्काउँछु । छेउको ऐनामा आफूलाई तलदेखि माथिसम्म पूरा हेर्छु । ऐनाले भन्छ– वाह, कोमल ओली ! तिमी क्या राम्री छौ !’ ‘वास्तवमा हामी सुन्दर छौँ, किन लाज मान्ने ? मलाई ‘आइ लभ यू, कोमल’ भन्नेहरू धेरै छन् । मजस्तै तपाईंहरू पनि सुन्दर हुनुहुन्छ । लाज मान्नु पर्दैन । शरीरको बनावट जस्तो भए पनि हामी सबै राम्रा छौँ ।
शृंगारले मात्र मान्छे राम्रो हुँदैन । प्रकृतिले नै हामीलाई सुन्दर बनाएको छ । कसैले रीस राग गर्नुपर्ने केही कारण छैन,’ कार्यक्रममा आफ्नै सन्दरताको समेत खेलेर बयान गर्दै कोमलले भनिन् । कार्यक्रममा ओलीको गीतले भन्दा भाषणले वाहवाही पाएको थियो । भूकम्पपछि निकै व्यस्त उनी उपत्यकाबाहिर पनि उत्तिकै जान्छिन् । ‘महिलालार्ई कसैले बाँध्ने प्रयास गर्नु हुँदैन । आ–आफ्नो स्वतन्त्रता हो– बिहे गर्नु नगर्नु, श्रीमान्सँगै बस्नु वा श्रीमान् छोड्नु । कसैले श्रीमती छोडेका छन् । कसैले श्रीमान् छोडेका छन् । ‘लिभिङ टुगेदर’ बस्नेहरूको पनि कमी छैन । आफ्नो रुचिअनुसार बस्ने अधिकार सबैलाई छ ।
यदि आफ्नो स्वतन्त्रता र चाहनामा अंकुश लागाइन्छ भने त्यो पनि महिला हिंसा हो,’ आफूलाई खुला विचारकी भन्न रुचाउने अविवाहित ओली माया प्रेमका बारेमा खुलेरै कुरा गर्न मन पराउँछिन् । कसले के भन्छ ? कसरी हेर्छ ? भन्नेसँग ओलीलार्ई चिन्ता छैन । कोमल ओलीका अभिव्यक्ति र गीत प्रायः जीवनसाथी नपाएको वा जीवनसाथीको खोजीमा रहेको शब्दमा आधारित हुन्छन् । श्रीमान् नपाएकोमा बेला–बेला उनी भगवान् शिवसंग गुनासो गर्न भ्याउँछिन् । आफ्ना गीतमा लाने, ल्याउने र गोजीमा गाँठ भएकालार्ई खुला आह्वान गर्ने उनलाई समाजको प्रवाह छैन । कार्यक्रममा ओलीले ‘सिमसिमे पानीमा ज्यानले बेमान गर्छ कि जिन्दगानीमा’ भन्ने बोलको गीतमा सबैलार्ई नचाइन् ।
कोमल ओलीको नयाँ तिज गीत भिडियो हेर्नुहोस !